Galmada canjaraha dhaxdooda oo ka macaan tan afka | Gaaloos.com
Home » galmada » Galmada canjaraha dhaxdooda oo ka macaan tan afka
Galmada canjaraha dhaxdooda oo ka macaan tan afka
Gabadhaan dhaqtaradda ah ee ku taqasustay cilmiga xiriirka ragga iyo dumarka ee xagga galmada ayaa sharaxaad dheer waxey ka bixisay faa’iidooyinka laga helo in gabadha laga jaqo xubinteeda taranka ama farjiga.
dhaqtaradaan ayaa sheegtay in jaqidda xubinta gabadha uu ninka ka helo kacsi fara badan marka uu sankiisa u dhaweeyo xubinta isaga oo sida xeywaanada oo kale ursoonaya shiirka xubintaasi kasoo baxaya taas oo kicineysa ayeey tiri rabitaankiisa inuu gabadha la sameeyo kulan jaceyl oo aad u macaan badan .
Sidoo kale Dhaqtaradda ayaa sheegtay inta badan in gabdha aduunyada nuugaan xubinta raggooda taasna waxey sheegtay in gabadha qaaradda Africa qaarkood ilkaha laga siibo si aysan wax yeelo u gaarsiin xubinta raggooda oo ay u nuugaan si aan qatar ku aheyn raggooda.
Dhaqtaradaan carbeed ayaa soo qaadatay daraasaad badan oo sheegaya in jaqidda xubnaha taranka laga helo dhibaatooyin caafimaad halka ay sidoo kale ku dheeraatay faa’iidada ku duugan.
DAAWO MUUQAALKA DHAQTARADA
Title: Galmada canjaraha dhaxdooda oo ka macaan tan afka